दुबीले हीनताबोध महसूस हुन्छ ? चिन्ता नलिनुस्, यसरी सकिन्छ हटाउन - ज्ञानविज्ञान
शरीरमा सेतो दाग भएर चिन्ता गर्ने युवतीहरू धेरै छन् । युवतीहरू मात्रै होइन युवादेखि बयस्कहरूमा पनि शरीरमा आउने सेतो दागले हीनताबोध गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको जनसंख्याको करीब १० प्रतिशत मानिसमा सेतो दुबीको समस्या रहेको धुलिखेल अस्पतालका छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णले लोकान्तरलाई बताए । उनका अनुसार सेतो दुबी फैलिने र नफैलिने गरी दुबई प्रकारका हुन्छन् । फैलिने सेतो दुबी शरीरको कुनै भागबाट शुरु भई विस्तारै शरीरभरि नै फैलन्छ भने, नफैली सेतो दुबी शरीरको कुनै भागमा मात्रै हुने गर्छ ।
छाला रोग तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डा. कर्णका अनुसार शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएमा शरीरमा सेतो दाग आउने गर्छ । कसैमा वंशाणुगत गुणका कारण सेतो दुबी आउने गर्छ भने कसैलाई बढी डर, तनावमा रहने मानिसमा सेतो दुबी आउने डा. कर्ण बताए । सोता दुबी रोग नभए पनि मानिसहरूले सुन्दरतामा कमी महसुस गरी उपचार गराउने गरेको उनले बताए ।
‘सेतो दाग कुनै रोग होइन । यसले शरीरमा कुनै असर गर्दैन । उपचार गर्नैपर्छ भन्ने छैन्,’ डा. कर्णले भने, ‘तर शरीरमा आएको दागकै कारण हीनताबोध महसुस हुन्छ । आत्मश्विासमा कमी आउँछ भने दाग हटाउन समयमा नै उपचार गर्नुपर्छ ।’
सेतो दुबीको उपचारका लागि खाने र दागमा लगाउने औषधि हुन्छ । सेतो दागलाई निको पार्न दाग नभेटिएसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्छ । सेतो दागको उपचारका लागि चिकित्सकले अनुमति दिएको औषधि सेवन गरी, औषधि खाएको दुई घण्टापछि घाममा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
औषधि सेवनले दुई महिनादेखि चार महिनासम्ममा दाग हराउन थाल्ने र विस्तारै निको हुँदै जाने डा. कर्णको भनाइ छ । उनले भने, ‘सेतो दुबीको उपचार जति छिटो गर्‍यो, उति छिटो निको हुन्छ । जति कम उमेर भयो, त्यति छिटो निको हुने गर्छ ।’
फोटो थेरापी भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट प्रकाशको किरणद्वारा उपचार गर्ने विधि हो ।
फोटो थेरापीमा कृतिम सूर्यको किरण वैज्ञानिक तरिकाबाट उत्पन्न गराई सेतो दाग भएकाहरूको शरीरमा प्रयोग गरिन्छ । फोटो थेरापीले छालाको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई नियन्त्रण गरी शरीरको दाग मेटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
फोटो थेरापी गराउँदा शुरुमा हप्तामा ३ पटकदेखि क्रमशः दुईपटक गरिन्छ । दाग हराउँदै गएपछि हप्तामा एकपटक मात्रै प्रयोग गरिने र किनो भएपछि गर्नु पर्दैन ।
सेतो दुबीको उपचार औषधि सेवनबाट नभएमा फोटो थेरापीबाट गर्न सकिने डा. कर्णले बताए । फोटो थेरापी गर्न सहज हुने भएकाले मानिसहरूमा यसको प्रयोग गर्न चाहने मानिस बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
Topics #दुबी #फोटो थेरापी #यस कारण आउँछ सेतो दाग #सेतो दाग
Up Next सुन्तला खानैपर्ने ११ कारण, पढाै र सेयर गराै